आयो रितु कोईरालाको लच्किएको कम्मर (भिडियो सहित) - Nalapani
आयो रितु कोईरालाको लच्किएको कम्मर (भिडियो सहित)
काठमाडौं । गायिका तथा मोडलको रुपमा आफ्नो परिचय स्थापित गरेकी रितु कोईरालाले गाएको लच्चक लच्चक लच्कियो बोलको गीतको भिडियो युट्युवमा सार्वजनिक भएको छ । लामो समय देखि नयाँ तथा पुराना प्रतिभाहरुलाई विशेष स्थान दिदै लोकप्रिय बनेको पुर्बेली जुनतारा म्युजिक प्रा.लि.ले सार्वजनिक गरेको उक्त गीतमा प्रियजन राईको शब्द तथा संगीत रहेको छ भने रितु कोईरालाले स्वर दिएकी छिन् ।
यो पनि पढनुहोस – यौनशक्ति बढाउने योगासन
पलेटी कसेर सीधा बस्नुस् र दुई कुर्कुच्चा जोडेर यसलाई यौनांगनजिक ल्याउने प्रयास अधितकम गर्नुहोस् । खुट्टाका औँलालाई दह्रोसँग समात्नुहोस्, गहिरो सास लिनुहोस् र तिघ्रालाई पुतलीको पखेटाजसरी फडफडाउनुहोस् र रफ्तार बढाउँदै लैजानुहोस् ।
यसो गर्नाले तिघ्राको भित्री भाग तन्किन्छ, हिपलगायत कम्मरमुन्तिरका भाग बलिया हुन्छन् । यसको सकारात्मक प्रभाव यौनजीवनमा पर्छ ।
१८० डिग्री स्प्लिट (हनुमानासन)
भुइँमा बसेर खुट्टालाई एक सय ८० डिग्रीमा फार्नुहोस् । अगाडिपट्टि तन्किएर सामुन्ने रहेको खुट्टाको कुर्कुच्चासम्म हात पु¥याउनुहोस् र ३० सेकेन्डसम्म यत्तिकै रहनुहोस् । यसले हिप र कम्मरमुन्तिरको भागमा रक्तसञ्चार तीव्र हुन्छ । सो क्षेत्रका मांसपेशीमा भएका तनाव हटाउँछ । यो आसनले तपाईंको यौन स्वास्थ्यलाई फाइदा पु¥याउँछ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
इन्भर्टेड प्लो (कर्णपिडासन)
माउन्टेन क्लाइम्बर पोज (पर्वतारोही आसन)
यो आसन गर्न सजिलो छ । भुइँतिर फर्किएर झुक्नुहोस् र दाहिने खुट्टा, दुइटा हात टेकेर तन्कनुहोस् । आफूलाई हिमाल चढ्न लागेको पर्वतारोहीको आसनमा पु¥याउन खोज्नुहोस् ।
अब देब्रे खुट्टाको सहाराले आफूलाई अघिकै आसनमा टेकाउनुहोस् र यसो गर्दा पर्वतारोहीले गर्नेजस्तै हाउभाउ गर्नहोस् । यसक्रममा गहिरो सास लिनुहोस् । यसो गर्नाले समग्र शरीरमा रत्तसञ्चार तीव्र हुन्छ । तिघ्राका भित्री मांसपेशी बलियो हुन्छ ।
कोब्रा पोज (भुजंगासन)
भुइँमा सुत्नुहोस् । हातका पञ्जा र तिघ्राको भरमा टाउकोलाई माथि उठाउनुस् । टाउको यसरी उठाउनुहोस्, गसरी गोमन सर्पले फणा उठाउँछ । सक्नुहुन्छ भने टाउको पछाडिपट्टि लैजानुहोस् र खुट्टा पछाडिबाट उठाएर टाउको छुवाउनुहोस् ।
गहिरो सास लिनुहोस् र केही बेरसम्म सास भित्रै रोक्नुहोस् । यही आसनमा ३० सेकेन्ड रहने कोसिस गर्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईंको ढाड, कम्मर, भुजाका जोर्नी आदि बलिया हुन्छन् । यस आसनले तपाईंको यौनशक्ति बढाउँछ ।
← साउथ फिल्मकी सुपरहिट नायिका काजलको हट फोटो मै जवानी देखियो , हेर्नुहोस् ‘हट फोटो सुट’ ! अन्ततः जनताको शक्ति सामु झुक्यो ठेकेदार बल्ल सुरु भयो बौद्ध–जोरपाटी सडक पिच ! →